ငွေ ၅၀၀၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းအစုံ အက်ဒ်မင်ဘယ်လိုဝယ်လဲ ? - For her Myanmar
၅၀၀၀၀ တည်းနဲ့ ဆိုပြီး မယုံနိုင်ဘူးမလား… ဖတ်ကြည့်လက်… ဖတ်ကြည့်လက်!!!! 😛
မိတ်ကပ်ပစ္စည်းဝယ်ခါနီးတိုင်း ဘတ်ဂျက်ချိန်ရတာနဲ့ ခေါင်းကိုက်ပြီး အသက်ထွက်ချင်စိတ်ပေါက်တတ်ကြတာ သဘာဝပါပဲနော်။ အဲဒီဖီလင်ကို နှင်းလည်းသိတယ်။ နှင်းလည်း အရင်တုန်းကတော့ လိုသည်ဖြစ်စေ၊ မလိုသည်ဖြစ်စေ မည်းမည်းမြင်ရာပစ္စည်းပေါင်းစုံကို ဝယ်တာဝယ်တာဆိုတာလေ… ကုန်ပေါင်းလည်း မနည်းလှ… အခုကျတော့ အိမ်ကလည်း မုန့်ဖိုးမပေးတော့ဘူးဆိုတော့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံလေးကို ခြစ်ချုပ်ပြီး မနည်းစုဝယ်နေရတဲ့ အနေအထားဆိုတော့ ဈေးလေးပေါပြီး တကယ်ကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုပဲ ရှာဖွေရင်း ဝယ်ဖြစ်တော့တယ်။ အဲဒါကြောင့် ယောင်းတို့လည်း အဆင်ပြေအောင် မျက်နှာ်တစ်ခုလုံး ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ဝယ်တဲ့အခါ ဘက်ဂျက် ၅၀၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင် အတွင်းဝင်အောင် နှင်းရွေးပေးပါ့မယ်နော်။
ပထမဆုံး နှင်းရဲ့ မျက်နှာအသားအရေက ပေါင်းစပ်နဲ့ ပုံမှန်အမျိုးအစား ကြားထဲကပါ။ အဆီလည်း အရမ်းမပြန်သလို ခြောက်လည်း အရမ်းမခြောက်ပါဘူး။ ပြီးရင် နှင်းက မိတ်ကပ်သားကို အရမ်းမထူဘဲ ပါးပါးကြည်ကြည်လေး လိမ်းရတာ ကြိုက်တတ်သူမို့ ဒီပစ္စည်းလေးတွေကို ရွေးထားပါတယ်နော်။
Related Article >>> Baking Makeup ဆွာ ဘာကြီးလဲ?
အပေါ်မှာပြောထားသလိုပဲ နှင်းကမိတ်ကပ်ကို ပါးပါးကြည်ကြည်လေးနဲ့ ကိုယ့်အသားအရေပေါ်တစ်ထပ်တည်း ကျနေတဲ့ မိတ်ကပ်ကိုမှ ကြိုက်တာဆိုတော့ Maybelline ရဲ့ Dream Satin Skin Liquid Foundation (၁၈၅၀၀ ကျပ်)ကို သုံးပါတယ်။ (အဆီပြန်တတ်တဲ့လူကတော့ သူနဲ့ဈေးအတူတူဖြစ်တဲ့ Flawless Transformation ကိုသုံးပေးနော်) အပေါ်ထပ်လေးကိုတော့ Doru White ရဲ့ two way ပေါင်ဒါ နံပါတ် (၉၁) ၅၈၀၀တန်ကို သုံးပါတယ်။ မျက်နှာအတွက်က ၂၄၃၀၀ ဖြစ်သွားပြီနော်။
နှင်းသုံးတဲ့အရောင်ကတော့ ၂၂၀ ပါ <3
မျက်ခုံးကိုတော့ Miniso ကနေ တစ်ချောင်း ၄၀၀၀ နဲ့ဝယ်ထားတာလေးပဲ သုံးဖြစ်တယ်။ သူက နှစ်ဘက်ပါတယ်ယောင်းရဲ့။ တစ်ဘက်က ဘေးတစ်စောင်းခဲနဲ့ တစ်ဘက်ကကျတော့ ဘရပ်ရ်ှလေးဆိုတော့ သပ်သပ်ကြီးထပ်ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ပြီးတော့ ခဲကလည်း အရမ်းထင်းနေတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ဘဲ ခပ်မှိန်မှိန်လေးပဲဆိုတော့ တစ်ချက်ချင်းစီ ဆွဲလည်းအဆင်ပြေတယ်လေ။ အားလုံးဆွဲပြီးရင်တော့ အမွှေးတွေနေရာတကျဖြစ်သွားအောင် ဘရပ်ရ်ှလေးနဲ့ ပြန်ဖီးပေးလိုက်ပေါ့။
နှင်းကလေ မျက်လုံးကို ဘာဘာညာညာတွေမခြယ်ဘဲ မျက်တောင်လေးပဲကော့ပြီး သွားရတာကို ကြိုက်လို့ မျက်တောင်ကော့ဆေးလေးပဲ ကောင်းကောင်းဝယ်သုံးတယ်ယောင်းရေ။ Hearty Heart ရဲ့ Double Scoop Mascara လေးကတော့ တကယ်ကို နေ့စဉ်သုံးအနေနဲ့ အဆင်ပြေတယ်။ အပေါ်မျက်တောင်အတွက်တင်မကဘဲ အောက်မျက်တောင်အတွက်ပါ ထည့်ပေးထားတော့ စိတ်ရှုပ်ခံပြီး ပြူးပြဲကော့နေစရာ မလိုတော့ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ မျက်ခမ်းပေါ်မှာ ပြန့်တတ်တာမို့ တစ်နေ့လုံး နေပူထဲတောက်လျှောက် ထွက်ရရင်တော့ မသုံးပါနဲ့။ သူက ဈေးလေးလည်း ပေါတယ်။ ၄၇၅၅ ကျပ်ဆိုတော့ ၄၈၀၀ ပေါ့။ တစ်ခါတလေ လိုင်နာသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ Maybelline ရဲ့ Hyper tight လိုင်နာလေးသုံးပါတယ်။ နှင်းက ယိုးဒယားမှာ ဈေးချတုန်း ဝယ်ထားတာဆိုတော့ ၈၆၀၀ ပဲကျတယ်။ ဘာလို့ဒီ Hyper Tight လေးကို ရွေးလဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ဘူးပုံစံကိုက ဘေးတစ်စောင်းလေးဖြစ်တဲ့အပြင် ထိပ်ကလည်း ခပ်ချွန်ချွန်လေးဆိုတော့ ဆွဲရတာ အရမ်းမခက်တော့ဘူးရယ်။ ပြီးရင် မပြန့်တတ်ဘူးသိလား။ တစ်နေကုန် ချွေးတွေရော ရေတွေရော အမျိုးစုံ ကြိုးခုန်ပြီး ထိတာတောင် နည်းနည်းပါးပါး ကွက်သွားတာပဲရှိတာ။ အရည်တွေပျော်မကျလာဘူး။
အခုက ဘလင်းဘလင်းခေတ်ဆိုတော့ ဟိုင်းလိုက်ကလည်း မပါမဖြစ် ထည့်ရမှာပဲလေ။ နှင်းကတော့ ဟိုင်းလိုက်ကို အသစ်ထပ်ဝယ်သုံးမနေဘဲ ရှဲဒိုးတွေထဲမှာပဲပါတဲ့ ဘလင်းဘလင်းအဖြစ်ဆုံး အလက်အလက်အများဆုံးပါတဲ့ အကွက်ကိုပဲ လက်ကလေးနဲ့ယူပြီး ပါးရိုးပေါ်မှာတင်ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် အသုံးအများဆုံးက Tony Moly ရဲ့ Cushion Pot လို့ခေါ်တဲ့ ရှဲဒိုးအကွက်အသေးလေးထဲမှာမှ ရွှေရောင်ကို သုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းလေးကတော့ ၁၀၅၀၀ပါ။ နှုတ်ခမ်းနီကတော့ ယောင်းတို့ဆီမှာရှိပြီးသားမို့ တကူးတကထည့်ပြီး မညွှန်းတော့ဘူးနော်။ ပါးနီကိုလည်း အဲဒီနှုတ်ခမ်းနီဆိုးပြီး လက်ကျန်အရောင်လေးတွေကို လက်ညှိုးထိပ်လေးနဲ့ ခပ်ဖွဖွလေးယူပြီး ပါးပေါ်ဖြန့်ပေးရုံပါပဲ။
လက်ညှိုးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီး လင်းချင်တဲ့ နေရာတွေပေါ်မှာ ဖွဖွလေးပွတ်လိုက်ပါ
Related Article >>> မိတ်ကပ်ကို ပန်းပုထုထားသလို သူတို့ဘယ်လိုလိမ်းကြလဲ?
ကဲ အားလုံးပေါင်းကြည့်တဲ့အခါ ၅၂၂၀၀ တိတိကျပါတယ်။ မျက်နှာ်တစ်ခုလုံးကို နှင်းအိမ်မှာ သုံးတဲ့ ဘရန်းတွေပဲ ထည့်ပေးထားတာပါနော်။ ဘတ်ဂျက်ဆိုလို့ ဈေးအပေါတကာ့ အပေါဆုံးတွေ မဟုတ်ရပါဘူးနော်.. ကွာလတီလည်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ဈေးလည်း အဲ့လောက်မကြီးတဲ့ဘရန်းလေးတွေပေါ့… ပုံလေးတွေလည်း ထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ ဝယ်ရတာလွယ်ကူပြီး အဆင်လည်း ပြေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ တခြား အလှအပနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း ထပ်မျှဝေပေးဦးမှာမို့ For Her Myanmar Page ကိုစောင့်ကြည့်ပေးနော်။
၅၀၀၀၀ တညျးနဲ့ ဆိုပွီး မယုံနိုငျဘူးမလား… ဖတျကွညျ့လကျ… ဖတျကွညျ့လကျ!!!! 😛
မိတျကပျပစ်စညျးဝယျခါနီးတိုငျး ဘတျဂကျြခြိနျရတာနဲ့ ခေါငျးကိုကျပွီး အသကျထှကျခငျြစိတျပေါကျတတျကွတာ သဘာဝပါပဲနျော။ အဲဒီဖီလငျကို နှငျးလညျးသိတယျ။ နှငျးလညျး အရငျတုနျးကတော့ လိုသညျဖွဈစေ၊ မလိုသညျဖွဈစေ မညျးမညျးမွငျရာပစ်စညျးပေါငျးစုံကို ဝယျတာဝယျတာဆိုတာလေ… ကုနျပေါငျးလညျး မနညျးလှ… အခုကတြော့ အိမျကလညျး မုနျ့ဖိုးမပေးတော့ဘူးဆိုတော့ ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ ပိုကျဆံလေးကို ခွဈခြုပျပွီး မနညျးစုဝယျနရေတဲ့ အနအေထားဆိုတော့ ဈေးလေးပေါပွီး တကယျကောငျးတဲ့ ပစ်စညျးတှကေိုပဲ ရှာဖှရေငျး ဝယျဖွဈတော့တယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ယောငျးတို့လညျး အဆငျပွအေောငျ မကျြနျှာတဈခုလုံး ပွငျဆငျဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှေ ဝယျတဲ့အခါ ဘကျဂကျြ ၅၀၀၀၀ ပတျဝနျးကငျြ အတှငျးဝငျအောငျ နှငျးရှေးပေးပါ့မယျနျော။
ပထမဆုံး နှငျးရဲ့ မကျြနှာအသားအရကေ ပေါငျးစပျနဲ့ ပုံမှနျအမြိုးအစား ကွားထဲကပါ။ အဆီလညျး အရမျးမပွနျသလို ခွောကျလညျး အရမျးမခွောကျပါဘူး။ ပွီးရငျ နှငျးက မိတျကပျသားကို အရမျးမထူဘဲ ပါးပါးကွညျကွညျလေး လိမျးရတာ ကွိုကျတတျသူမို့ ဒီပစ်စညျးလေးတှကေို ရှေးထားပါတယျနျော။
Related Article >>> Baking Makeup ဆှာ ဘာကွီးလဲ?
အပျေါမှာပွောထားသလိုပဲ နှငျးကမိတျကပျကို ပါးပါးကွညျကွညျလေးနဲ့ ကိုယျ့အသားအရပေျေါတဈထပျတညျး ကနြတေဲ့ မိတျကပျကိုမှ ကွိုကျတာဆိုတော့ Maybelline ရဲ့ Dream Satin Skin Liquid Foundation (၁၈၅၀၀ ကပျြ)ကို သုံးပါတယျ။ (အဆီပွနျတတျတဲ့လူကတော့ သူနဲ့ဈေးအတူတူဖွဈတဲ့ Flawless Transformation ကိုသုံးပေးနျော) အပျေါထပျလေးကိုတော့ Doru White ရဲ့ two way ပေါငျဒါ နံပါတျ (၉၁) ၅၈၀၀တနျကို သုံးပါတယျ။ မကျြနှာအတှကျက ၂၄၃၀၀ ဖွဈသှားပွီနျော။
နှငျးသုံးတဲ့အရောငျကတော့ ၂၂၀ ပါ <3
မကျြခုံးကိုတော့ Miniso ကနေ တဈခြောငျး ၄၀၀၀ နဲ့ဝယျထားတာလေးပဲ သုံးဖွဈတယျ။ သူက နှဈဘကျပါတယျယောငျးရဲ့။ တဈဘကျက ဘေးတဈစောငျးခဲနဲ့ တဈဘကျကကတြော့ ဘရပျရျှလေးဆိုတော့ သပျသပျကွီးထပျဝယျစရာမလိုတော့ဘူး။ ပွီးတော့ ခဲကလညျး အရမျးထငျးနတေဲ့ဟာကွီးမဟုတျဘဲ ခပျမှိနျမှိနျလေးပဲဆိုတော့ တဈခကျြခငျြးစီ ဆှဲလညျးအဆငျပွတေယျလေ။ အားလုံးဆှဲပွီးရငျတော့ အမှေးတှနေရောတကဖြွဈသှားအောငျ ဘရပျရျှလေးနဲ့ ပွနျဖီးပေးလိုကျပေါ့။
နှငျးကလေ မကျြလုံးကို ဘာဘာညာညာတှမေခွယျဘဲ မကျြတောငျလေးပဲကော့ပွီး သှားရတာကို ကွိုကျလို့ မကျြတောငျကော့ဆေးလေးပဲ ကောငျးကောငျးဝယျသုံးတယျယောငျးရေ။ Hearty Heart ရဲ့ Double Scoop Mascara လေးကတော့ တကယျကို နစေ့ဉျသုံးအနနေဲ့ အဆငျပွတေယျ။ အပျေါမကျြတောငျအတှကျတငျမကဘဲ အောကျမကျြတောငျအတှကျပါ ထညျ့ပေးထားတော့ စိတျရှုပျခံပွီး ပွူးပွဲကော့နစေရာ မလိုတော့ဘူးလေ။ ဒါပမေဲ့ သူကတော့ မကျြခမျးပျေါမှာ ပွနျ့တတျတာမို့ တဈနလေုံ့း နပေူထဲတောကျလြှောကျ ထှကျရရငျတော့ မသုံးပါနဲ့။ သူက ဈေးလေးလညျး ပေါတယျ။ ၄၇၅၅ ကပျြဆိုတော့ ၄၈၀၀ ပေါ့။ တဈခါတလေ လိုငျနာသုံးရမယျဆိုရငျတော့ Maybelline ရဲ့ Hyper tight လိုငျနာလေးသုံးပါတယျ။ နှငျးက ယိုးဒယားမှာ ဈေးခတြုနျး ဝယျထားတာဆိုတော့ ၈၆၀၀ ပဲကတြယျ။ ဘာလို့ဒီ Hyper Tight လေးကို ရှေးလဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ဘူးပုံစံကိုက ဘေးတဈစောငျးလေးဖွဈတဲ့အပွငျ ထိပျကလညျး ခပျခြှနျခြှနျလေးဆိုတော့ ဆှဲရတာ အရမျးမခကျတော့ဘူးရယျ။ ပွီးရငျ မပွနျ့တတျဘူးသိလား။ တဈနကေုနျ ခြှေးတှရေော ရတှေရေော အမြိုးစုံ ကွိုးခုနျပွီး ထိတာတောငျ နညျးနညျးပါးပါး ကှကျသှားတာပဲရှိတာ။ အရညျတှပြေျောမကလြာဘူး။
အခုက ဘလငျးဘလငျးခတျေဆိုတော့ ဟိုငျးလိုကျကလညျး မပါမဖွဈ ထညျ့ရမှာပဲလေ။ နှငျးကတော့ ဟိုငျးလိုကျကို အသဈထပျဝယျသုံးမနဘေဲ ရှဲဒိုးတှထေဲမှာပဲပါတဲ့ ဘလငျးဘလငျးအဖွဈဆုံး အလကျအလကျအမြားဆုံးပါတဲ့ အကှကျကိုပဲ လကျကလေးနဲ့ယူပွီး ပါးရိုးပျေါမှာတငျဖွဈတယျ။ ဒါ့အပွငျ အသုံးအမြားဆုံးက Tony Moly ရဲ့ Cushion Pot လို့ချေါတဲ့ ရှဲဒိုးအကှကျအသေးလေးထဲမှာမှ ရှရေောငျကို သုံးဖွဈပါတယျ။ ဈေးနှုနျးလေးကတော့ ၁၀၅၀၀ပါ။ နှုတျခမျးနီကတော့ ယောငျးတို့ဆီမှာရှိပွီးသားမို့ တကူးတကထညျ့ပွီး မညှနျးတော့ဘူးနျော။ ပါးနီကိုလညျး အဲဒီနှုတျခမျးနီဆိုးပွီး လကျကနျြအရောငျလေးတှကေို လကျညှိုးထိပျလေးနဲ့ ခပျဖှဖှလေးယူပွီး ပါးပျေါဖွနျ့ပေးရုံပါပဲ။
လကျညှိုးလေးနဲ့ဖိဆှဲပွီး လငျးခငျြတဲ့ နရောတှပေျေါမှာ ဖှဖှလေးပှတျလိုကျပါ
Related Article >>> မိတျကပျကို ပနျးပုထုထားသလို သူတို့ဘယျလိုလိမျးကွလဲ?
ကဲ အားလုံးပေါငျးကွညျ့တဲ့အခါ ၅၂၂၀၀ တိတိကပြါတယျ။ မကျြနျှာတဈခုလုံးကို နှငျးအိမျမှာ သုံးတဲ့ ဘရနျးတှပေဲ ထညျ့ပေးထားတာပါနျော။ ဘတျဂကျြဆိုလို့ ဈေးအပေါတကာ့ အပေါဆုံးတှေ မဟုတျရပါဘူးနျော.. ကှာလတီလညျးကောငျးကောငျးလေးနဲ့ ဈေးလညျး အဲ့လောကျမကွီးတဲ့ဘရနျးလေးတှပေေါ့… ပုံလေးတှလေညျး ထညျ့ပေးထားတာဆိုတော့ ဝယျရတာလှယျကူပွီး အဆငျလညျး ပွလေိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။ တခွား အလှအပနဲ့ပတျသကျပွီးလညျး ထပျမြှဝပေေးဦးမှာမို့ For Her Myanmar Page ကိုစောငျ့ကွညျ့ပေးနျော။
Tags: 50k, admins, around, Choice, Everyday, kyats, makeup, natural
ဘယ်လို အချိန်မျိုးတွေမှာ ဆံပင်တို ညှပ်သင့်လဲ?
Hnin Ei Oo December 23, 2018